भागरथी हत्या प्रकरण : ४० वर्ष पहिला बुवाले गरेको घटनाले भागरथीको हत्या ? – Himalitimes
भागरथी हत्या प्रकरण : ४० वर्ष पहिला बुवाले गरेको घटनाले भागरथीको हत्या ?
२०७७ फाल्गुन ५ १६:५१ मा प्रकाशित
बैतडी। बैतडीकी १७ वर्षीया किशोरी भागरथी भट्टको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका किशोरलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ ।
भट्टको बलात्कार तथा हत्या आरोपमा पक्राउ परेका दिनेश भट्टलाई सार्वजनिक गरिएको हो । प्रहरीका अनुसार भट्टले घाँटी थिचेर हत्या गरेको बयान दिएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डिआईजी उत्तमराज सुवेदीले आरोपीले भागरथीलाई सुरुमा धकेलेर लडाएको अनि दुवै हातले घाँटी थिचेर हत्या गरेको बताए ।
‘अनुसन्धानले उनी एक्लै यसमा संलग्न देखिएको छ, अब फरेन्सिक ल्याब लगायक अन्य रिपोर्टहरु आएपछि हामी थप तथ्यहरु बाहिर ल्याउन सक्छौ,’ उनले भने । भट्टले ढुकेर भागरथीको हत्या गरेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।
माघ २१ गते दिउँसो करिब २ बजेतिर ती किशोर अन्तिम कक्षा नपढी साथीहरूसँग फर्किएका थिए ।
साथीहरूसँग जाँदा उनी बजारबाट साथीहरूसँग छुटेर घर जाने भन्दै फर्किएको डिआइजी सुवेदीले बताए।‘घर जाने क्रममा घटनास्थल पुगेर भागरथीलाई मार्ने उदेश्यले कुरेर बसेको देखियो,’ उनले भने, ‘भागरथीलाई सडकभन्दा तल धकेलेर लडेपछि जबरजस्ती घाँटी थिचेर मारेको देखियो,’ डिआइजी सुवेदीले भने ।
किशोरले बलात्कार भने नगरेको प्रहरीको बयानमा भनेका छन् । तर, पोष्टमार्टम रिपोर्टमा बलात्कार भएको देखिएको थियो ।
१६ वर्षको किशोरले १७ वर्षकी किशोरीलाई जबजस्ती बलत्कार र हत्या गर्न सम्भव छ त ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘घटनास्थलको प्रकृति र उसले गर्नसक्ने गतिविधि हेर्दा गर्न नसक्ने भन्ने छैन ।’
पुरानो रिसिइबी कारण ?
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी मुकेशकुमार सिंहका अनुसार भट्टले पारिवारिक रिसइबीका कारण हत्या गरेको बयान दिएका छन् ।
प्रहरीसँगको वयानमा उनले भनेका थिए, ‘भागरथी र मेरो परिवारबीच पहिलेदेखि घरायसी रिसिइबी थियो । सोही कारण मैले उनको हत्या गरेको हुँ ।’
दिनेशले पुरानो घटनाका बारेमा उल्लेख गरेका कारण के उनले प्रतिशोध लिएका हुनसक्छन् भन्ने प्रश्न उव्जिएको छ ।
पहिलेदेखिको घरायसी रिसिइबी बारे थाहा पाउनका लागि ४० वर्ष पहिले फर्किनु पर्ने हुन्छ ।
घटना २०४० साल तिरको हो । भागरथीका बुबा कृष्णानन्दले अनैतिक सम्बन्ध राखेर दिनेशकी एक नातेदार गर्भवती बनेकी थिइन् ।
भागरथीका बुबा कृष्णानन्दबाट दिनेशकी आफन्तको पेटमा गर्भ रहेपछि कृष्णानन्द गाउँ छोडेर भारत गएका थिए । भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा ४ वर्ष काम गरेर फर्किएपछि कृष्णानन्दलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
भागरथीका बुबाकृष्णानन्द बैतडी कारागारमा ६ महिना सजाय भोगेको आफूले सुनेको स्थानीय भूमिराज माविका प्रधानाध्यापक प्रजापति भट्ट बताउँछन् । धेरै वर्ष अघिको कुरा भएको र आफूलाई सबै याद नभएपनि जबर्जस्ती करणी मुद्दामा पक्राउ परेर जेल बसेको भन्ने आफूले थाहा पाएको उनले बताए ।
भागरथी र दिनेश दुवैले कक्षा १ देखि १० सम्म भूमिराज माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका थिए ।
अदालतले छ महिना कैद सजाय भोगेर भागरथीका बुबा जेलमुक्त भएका हुन् वा सफाइ पाएका हुन् भन्नेचाहिँ खुलेको छैन ।
दिनेशले भनेको पुरानो रिसिइबीको बेलामा उनी र भागरथी दुबै जन्मिएका थिएनन् ।
छरछिमेकी र गाउँका अन्यले पनि दुई परिवारबीच पुरानो विषयले अहिले कुनै मनमुटाव वा झगडाको अवस्था नरहेको बताएका छन् । भागरथीका बुवाको पुस ७ गते निधन भएको थियो । @ dainionline
सूचीमाथि नेशनल डिजास्टर कानून उल्लंघन गरेको अभियोग
भागरथी हत्या प्रकरण– आरोपी गाँजा सेवन गर्थे,घाँटी थिचेर मारेको हुनसक्ने अनुमान